Sekoly sy fampianarana - Easy Multi Display - Digital Signage Soft
Sekolin'ny fikarakarana andro, sekoly, sekoly ambony sy ny varotra
FANTARO NY FOTOTRANO
Tohizo ny fampianarana sy fampahafantarana ireo mpiasa sy ny mpampianatra amin'ny sekol ...
Na mihazona ivon-jaza kely na toeram-pampianarana lehibe ianao, Easy Multi Display dia mitazona ny mpiara-miasa sy ny mpianatrao hatramin'izao. Ampahafantaro azy ireo ny fisehoan-javatra ho avy, ny fanadinana, ny fialantsasatra ary na ny fitsipiky ny sekoly, ny fitsipika sy ny fomba.
Mifandraisa aminay anio hiresaka momba ny filanao ary manomboka mahazo ny tombontsoa amin'ny fampiasana rindrambaiko fampisehoana multimedia mora vidy sy mora indrindra indrindra eny an-tsena.
NAHOANA NO Mampiasa ny fampisehoana mora MULTI ho an'ny sekoly?
TANDREMO NY STAFF & MPIANATRA
Ny mpianatra, ny ray aman-dreny ary ny mpiasa rehetra dia mahazo tombony amin'ny fahazoana daty amin'ny fanadinana, fialantsasatra ary fampisehoana aseho.
Asehoy ny fomba fiasa sy ny fitsipika
Ampahatsiahivo ny mpiasao sy ny mpianatra momba ny fitsipiky ny sekoly sy ny fitsipi-pitondran-tena. Fomba lehibe hanehoana fomba fiasa vaovao na lotra miasa.
Mahafantatra & MIARAKA
Arahabaina izay nahazo mari-pankasitrahana tamin'ny alàlan'ny fanolorana mari-pankasitrahana ary tamin'ny fanehoany tamim-pireharehana ny fahombiazany ho an'ny mpiasa, ny mpianatra ary ny ray aman-dreny.
Mampiasa Easy Multi Display ao amin'ny efitraninay izahay ao amin'ny Unicef ​​mba hampisehoana ny hetsika ataontsika amin'ny ankizy manerana an'izao tontolo izao. Izany dia
ny fahafahantsika maneho ny fanoloran-tenantsika amin'ny fomba mavitrika - mampiasa fihetseham-po.